Iswiidhan oo dalka Irland lacag amaahineeysa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
wasiirka maaliyadda dalkaan Iswiidhan Anders Borg.
Iswiidhan oo dalka Irland lacag amaahineeysa
Publicerat måndag 29 november 2010 kl 11.20
Dalkaan Iswiidhan ayaa lix milyaardar oo karoon amaahinaya dalka Irland oo ay baryahaanba la soo gudboonaadeen dhibaatooyin dhaqaale,sidaasna waxaa lagu cadeeyey shir aan caadi aheeyn oo ay maalintii axaddii magaalada Bryssel isugu yimaadeen wasiirada maaliyadda ururka midoowga yurub.
Guud ahaan lacagta la rabo in lagu badbaadiyo dhaqaalaha dalka Irland oo ciirciiraya ,ayaa dhan 800 milyaardar oo karoon taas oo ay badankeeda bixinayaan dalalka isticmaala lacagta Euro-da iyo hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ta.
Laakiin dalalka Iswiidhan ,Boqortooyada Ingiriiska iyo Denmark oo iyagu xubno ka ah ururka midoowga yurub balse aan isticmaalin lacagta Euro-da,ayaa dalka Irland si wadajir ah u amaahinaya lacag dhan 45 milyaardar oo karoon.
Wasiirka maaliyadda dalkaan Iswiidhan Anders Borg oo sharxayey sababta uu dalkaani amaahda u siinayo dalka Irland, ayaa sheegey in haddii uu gubanayo aqal dariskaaga ahi ,ay waajib tahay in loo wadagurmado sidii dabkaas loo damin lahaa waayo haddii kale dabkaasi wuu fidayaa,dalkaan Iswiidhana dan ayaa ugu jirta in ay hawshaas ka qeeyb qaadato.
Wasiirka ayaa intaas ku darey in Iswiidhan tahay dal yar oo aad ugu xiran wadamada dibadda sidaas daraadeedna dani ugu jirto in ay ka qeeyb qaadato badbaadinta dhaqaalaha dalka Irland.